Radio Simba – Page 20 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Farmaajo oo Xilkii Ka Qaaday Ibraahim Mahad Alle iyo Aadan Cali Fiidow
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xeer uu soo saaray ku magacaabay Mudane Axmed Xasan Iimaan inuu noqdo Guddoomiye K/Xigeenka Arrimaha Maamulka iyo Maaliyadda ee Gobolka Banaadir, halka Cumar Cali Cabdi loo magacaabay inuu noqdo Guddoomiye K/Xigeenka Gobolka Banaadir ee Hawlaha Guud. “Madaxweynaha ayaa markii uu arkay in ay jirto baahi loo qabo in loo magacaabo Gobolka ...
War Deg Deg:-Laba Ruux oo Lagu Dilay Magaaladda Muqdisho+Sawirro
Ciidamadda Amaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Degmadda Dharkinley ee Gobolka banaadir waxa ay ku dileen Laba Dhalinyaro oo Hubeysnaa. Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal ragga la toogtay ee hubeysnaa ayaa la sheegay in ay rasaas isweedaarsadeen Ciidamadda amniga ka hor inta aysan dilin Ganacsade lagu magacaabi jirey Marxuum Daahir Maxamed Gaab. Rasaastii la isweedaarsaday ayaa keentay in la dilo Labada ...
Akhriso:-Turky-ga oo Shaqaalihiisa Kala Baxay Magaaladda Muqdisho+Sawirro
Turky-ga ayaa Magaaladda Muqdisho kala baxay Shaqaalihiisa,xili Cudurka carona-Vurus uu dunidda sameeyay. Diyaaradda Turkish Airlines ayaa Shaqaalaha Turkiga ka daad-gureysay Garoonka Aadan Cadde, ka dib markii halkaasi la isugu geeyay. Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Turky-ga ayaa lagu sheegay in Magaaladda Muqdisho la keenay Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalkaas. “Digtoonaantii uu qaatay Madaxweynaheena si looga hortago faafitaanka ...
Wasaaradda Caafimaadka oo Sheegtay in ay Soo Kordheen 62 xaaladood Cusub
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa war kasoo saartay xaalado cusub oo ku soo kordhay Covid-19. Wasaaraddu waxaa ay shaacisay 62 xaaladood cusub ee Covid-19,taasi oo tirada guud ka dhigaysaa 390 oo kiis dadka uu soo ritay xanuunka Corona Virus. Sidoo kale waxaa jirta ,2 qof oo u geeriyootay xanuunkaasi,waxaana tirada guud ay ka dhigaysaa 18 qof,sidoo kale labo kale ...
Rag Hubeysnaa oo Lagu Qabtay Magaaladda Muqdisho
Booliska Gobolka Banaadir ayaa qabtay 5 Qof oo 2 ka mida Hubaysnaayeen, kuwaasoo ku dhex dhuumanayay Dibadbaxayaashii Daljirka Dahsoon shalay ku banaanbaxayay. Qoraal kasoo baxay Taliska booliska ayaa lagu sheegay in ragga la qabtay ay ahaayeen Al-Shabaab.
Dowladda oo Bandowgii ku Celisay 08:00, iyoTaliye Xilka Laga Qaaday
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya Gen. Cabdi Xasan Maxamed Xajaar oo goordhaw shir jaraa,id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in bandowgii lagu celiyay 8:00 fiidnimo iyadoo la tixgalinayo cabashada dadweynaha. Waxa kale uu taliye Gen: Xijaar uu sheegay in askarigii dilka geystay la xiray, taliyihii saldhigga degmada Boondheere Najiib Carabna xilki laga qaaday Taliye Xajaar ayaa shaaciyay in aanu bandowgu saameyn doonin ...
Xildhibaano Mooshin ka Gudbiyay Gudoomiye Sheekh Cusmaan Barre
66 xildhibaan oo ka Tirsan Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle ayaa mooshin Ka jawaabid ah fara galinta uu Xukuumada ku haayo Ka gudbiyay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre Sida Qoraalka Ku qoran.
Booliska oo Soo Bandhigay Askarigii Xalay Dilay Labadda Ruux+Sawir
Taliska Booliska Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay askari ka tirsan Ciidamadda Booliska Dowladda Soomaaliya oo xalay magaaladda muqdisho ku dilay Wiil dhalinyaro ahaa iyo haweeney Umul aheyd. Askariga falkaan geystay ayaa lagu magacaabaa D/Le booliis Xasan Aadan Xasan oo 24-sano jir ah. Qoraal kasoo baxay Booliska ayaa lagu sheegay in gacan ku dhiiglaha si deg deg ah maxkamad loo saari doono ...
XFS oo Amartay in Guryaha Lagu Dukado Salaadaha Cishaha iyo Taraawiixda+sawirro
Wasaaradda Awqaafka iyo Arrimaha diinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ay soo saartay amarro ku aadan sida bulshadu ay u oogayaan salaadaha Cishaha iyo Taraawiixda,inta lagu guda jirow xiliyada Bandowga. Wasiirka wasaaradaasi Sheekh Nuur Maxamed Xasan,wasiir ku-xigeenka Cismaan Aadan Dhuubow iyo mas’uuliyiinta kale ee wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowladda Soomaaliya ayaa kulan arrimahaasi looga hadlayay la yeeshey Culimaa’udiinka Soomaaliya,kulankaasi ...
Akhriso:-Al-shabaab oo Soo Saaray Fariin Ku Socota Shacabka Soomaaliyeed
Hoggaanka Xarakada Al-shabaab ayaa umadda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka faa’iidaystaan bisha barakaysan ee Ramadaan. Kalimad uu jeediyay Sheekh Cali dheere oo ah Afhayeenka Xarakada Al-shabaab ayuu muslimiinta ku baraarujiyay ka faa’iidaysashada bishan fadliga iyo kheyrka badan. Shiikh Cali dheere ayaa dhanka kale ka hadlay go’aanka Dowladda Soomaliya kasoo baxay ee ku aadan in la xiro goobaha cibaadda Sida ...
Page 20 of 2,326« First...10«1819202122	»	304050...Last »